Ny antsipiriany rehetra amin'ny fakantsary Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Alfonso de Frutos | | MWC, About us, Samsung
Rehefa nanana fotoana nosedraina izy roa Samsung Galaxy S6 toy ny Galaxy S6 Edge ny fiheverana voalohany dia tsy tokony ho nisy fiheverana tsara kokoa. Fantsona iray misy famaranana lehibe sy fitaovana matanjaka izay midera ny Samsung Galaxy S6 eo an-tampon'ny sehatra.
Fantatr'i Samsung fa ny fakantsary dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny finday avo lenta ary izany no antony niasàny mafy mba hahatonga ny solomaso misy ny hazany vaovao ho iray amin'ireo hery matanjaka. Ary, raha ny hevitro, Ny fakantsarin'i Samsung Galaxy S6 no tsara indrindra hitako nandritra ny fotoana ela.
1 Fakan-tsary mialoha sy aoriana misy f / 1.9, ny vavahady midadasika misy amin'ny smartphone
2 Autofocus miaraka am-pitadiavana fihetsiketsehana sy ny fanamafisana ny sary optika
3 HDR amin'ny fotoana tena izy
4 Fakan-tsary eo anoloana 5 megapixel misy zoro malalaka
5 Rindrambaiko matanjaka sy manavao izay mampifandray ireo safidy toa ny mode fidirana haingana
Fakan-tsary mialoha sy aoriana misy f / 1.9, ny vavahady midadasika misy amin'ny smartphone
Samy misy ny s fakantsary aoriana sy anoloana an'ny Samsung Galaxy S6Ensor Sony Exmor IMX240, ilay solomaso mitovy amin'ny fampidirana ny Note 4, na dia misy fanovana vitsivitsy aza izay mahatonga ny sary namboarina ho tsara kokoa noho ireo natao tamin'ny sainam-pianakaviana Note.
Betsaka ny olona mihevitra fa ny megapixels no zava-drehetra, tsy misy lavitra ny fahamarinana. Misy antony hafa mamaritra ny kalitaon'ny sary, fa tsy ny famahana ihany. Ary amin'ity lafiny ity Samsung dia nitandrina fakan-tsary tsara an'ny hazakazanao vaovao.
Ary ny iray amin'ireo singa manandanja indrindra dia ny fisokafana. Amin'ny tranga fakantsary Samsung Galaxy S6 dia f / 1.9, iray amin'ireo avo indrindra amin'ny indostria Izy io dia ahafahana misambotra hazavana bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny tifitra amin'ny ankapobeny.
Autofocus miaraka am-pitadiavana fihetsiketsehana sy ny fanamafisana ny sary optika
Ny Galaxy S6 sy S6 Edge dia mampiditra fampidirana autofocus mahaliana izay mandeha ho azy foibe misy zavatra, na mijanona na mihetsika, amin'ny alàlan'ny maody Autofocus misy ny fitiliana ny hetsika. Fampisehoana iray atolotry ny fakan-tsary eo amin'ny sainam-pianakaviana vaovao S.
Ho setrin'izany dia somary miadana kokoa ny fomba fiasa noho ny teo alohany. Raha ny fakantsary an'ny Galaxy S5 dia afaka maka sary ao anatin'ny 0.3 segondra. ny fakantsary Samsung Galaxy S6 dia maharitra 0.7 segondra.
Mampiavaka azy koa ny fanamafisana ny sary optika na OIS amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy. Ity asa ity dia manonitra ny fihetsiketsehana rehetra rehefa maka sary, manalavitra ireo sary manjavozavo mahasosotra.
HDR amin'ny fotoana tena izy
Naka sary azy ahofaritra avo Dynamic na ny elanelam-pahefana avo lenta dia misoroka ny fampisehoana miharihary ireo zavatra mamiratra indrindra, mamaha ny olana izay mahatonga ny fakana sary amin'ny toe-javatra misy hazavana tena mifanipaka, izay mety may ny sary amin'ny ampahany may ary amin'ny faritra hafa maizina loatra.
Ankoatr'izay, Samsung dia nanatsara ny teknolojia HDR mamela, amin'ny tena izy, afaka jerentsika mivantana eo amin'ny efijery ny valiny alohan'ny handraisana azy. Ary miasa amin'ny fakantsary roa izy io, na amin'ny sary na amin'ny maody horonantsary!
Fakan-tsary eo anoloana 5 megapixel misy zoro malalaka
Ny fijerena sary an-tsaina dia eto, ary fantatr'i Samsung izany. Ho an'ity dia nahitana zoro malalaka ao ny fakantsary eo aloha, izay mahatratra 120 degre ankehitriny, mihoatra ny 88 degre izay atolotry ny ankamaroan'ny fitaovana.
Rindrambaiko matanjaka sy manavao izay mampifandray ireo safidy toa ny mode fidirana haingana
samsung efa nieritreritra ny zava-drehetra ka ny Fakan-tsary Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge ho tsara indrindra eny an-tsena. Porofon'izany ny rindrambaiko matanjaka ao amin'ilay fitaovana ahafahanao misafidy karazana sary sy fomba fakana sary maro karazana.
Azontsika atao ny mampihetsika ny fameram-potoana, mampihatra effector na manova ny jiro, avy eo amin'ny efijery avokoa alohan'ny hitifirana ny sary ary tsy mila mivezivezy amin'ny pejy samihafa.
Azonao atao koa ny mifamadika amin'ny maody fakan-tsary mahazatra mankany amin'ny maody fakan-tsary matihanina, mamela ny mpampiasa a Fanaraha-maso feno ny fandanjana fotsy, ny saturation ary ny fiasa hafa mifantoka amin'ny sary matihanina kokoa.
Raha fintinina dia tsy afaka manamarina aho fa ny Samsung Galaxy S6 dia manana fakantsary tsara indrindra eny an-tsena, saingy afaka manome toky aho fa io no iray amin'ireo feno indrindra hita eny an-tsena. Ary ianao, Ahoana ny hevitrao momba ny fakantsary amin'ny Samsung Galaxy S6 sy Galaxy S6 Edge?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S6, ny antsipiriany rehetra momba ny fakantsary mahery
Ny fakan-tsarin'ny S6-ko dia mitondra ny safidy selfie sy panoramic ihany, tsy manana ny safidin'ny fakan-tsary araka ny aseho etsy ambony io, satria ampandehiko ny interface na bara ambony hanehoana azy ireo!
Azonao vahana ve? Toy izany koa no mahazo ahy !!
Ny mahantra amin'ny fanovana ny fikirakirana na amin'ny fanovana dia miova avy amin'ny maody tsotra mankany amin'ny maody mahazatra. fiarahabana
Mitovy tanteraka amiko izany. Ny maody automatique sy panoramic ihany no hita rehefa manokatra ny fakan-tsary any aoriana aho ary rehefa miova amin'ny fakan-tsary eo aloha dia miseho ny Selfie sy ny selfie panoramic. Efa niaraka tamin'ny telefaona nandritra ny volana maromaro aho ary tsy azoko ny zavatra nolazain'izy ireo momba ny hakanton'ny fakantsary. Tsy hitako ihany koa ny safidy hampidina maody
Valiny tamin'i María José
ny sisiko s6, mandeha ho azy ny photoshop mahatsiravina, hany ka simba ny endriny. tsy tsipika maneho hevitra, mivoaka ho manjavozavo amin'ny photoshop be loatra
Rehefa manokatra ny fakan-tsary ianao amin'ilay ampahany milaza hoe Mode dia azonao atao ny manova ireo izay anananao, ary raha tsy izany raha manana safidy HANAO ianao dia maody bebe kokoa ary ho an'ny fakan-tsary aloha sy aoriana !!
Natao hananana ny safidin'ny fakan-tsary rehetra mankany amin'ny toerana misy anao; manokana; maody mora ary tsindrio ny maody mahazatra (andramo ny hamonjy izany fanaingoana izany
Raha tsy izany dia tsy hisy vokany
Toy izany koa no mitranga amiko, manana ny galaxi s6edge aho, hitako ny zava-mahatalanjona amin'ny fakan-tsary amin'ny doka ary tsy hita afa-tsy ny panaramico sy ny auto aho ... na dia mitady azy hoatrinona aza aho dia tsy mahita ny fomba fampidinana na timer azoko apetraka dia tiako ny raha afaka miteny amiko ny fomba hanompoanao ianao, misaotra
Eny, manana s6 ara-dalàna aho ary tsy mamaly ny fakan-tsary any aoriana, milaza amiko izy fa nijanona ny fampiharana ary nivoaka izy ary nosedraina mandra-pameren'izy ireo ny ozinina ary tsy misy na inona na inona ao amin'ny mpitantana mahazo ny sarin'ny fakantsary, inona no tokony hataoko?
erka dia hoy izy:
Salama, manana ny s6 edge plus aho ary rehefa maka ny sariko miaraka amin'ny fakantsary anoloana amin'ny selfie ary voatahiry ilay sary dia mipetaka, ahoana no hanovako izany?
Mamaly an'i erka
guatealdia dia hoy izy:
Tsy fantatro izay nitranga, fa ny sarin'ny S6-ko dia ambany ny vahaolana, na dia 16M aza ny haben'ny voafantina amin'ny fitaovana ... misy mahalala ny azoko atao
Mamaly an'i guatealdia
Lucero Blue dia hoy izy:
Salama, ny S6 iraisako amin'ny fakan-tsary eo aloha dia maka sary mihetsika aho ary hita amin'ny fanamafisana be izany, tonga toa izao ve ny fakan-tsary? valio azafady
Valiny tamin'i Azul Lucero
Fikirana, maody tsotra, ao anaty tsindrio ny safidy maody tsotra ary esory ny fakantsary etsy ambany, apetraho Done (hanova ny zava-drehetra izy io) fa miverena any amin'ny setting, maody tsotra ary ao anatiny, apetraho ny maody mahazatra amin'ity indray mitoraka ity (miaraka amina fakantsary tsy mandeha) apetraka ary vonona. . Mandehana amin'ny fakantsary ary jereo ny bara sy ny fomba fampiasana azy
Ataovy izao ... ADJUSTMENTS. MODE SIMPLE. (Efa misy safidy roa ao anatiny) misafidy MODE SIMPLE, etsy ambany tsara dia esory ny safidin'ny fakantsary izay voalohany ary apetraho VITA. Vita izay dia aza matahotra ianao, ho hitanao fa niova ny zava-drehetra, fa miverena amin'ny FANAZAVANA. MODE SIMPLE ary amin'ity indray mitoraka ity misafidy MODY STANDARD. Ary napetrak'izy ireo VITA. Ary vonona 🙂 mankanesa any amin'ny fakantsaranao ary jereo fa efa anananao ny bara ary ny fombany izay tsy hitanao?